•Sicela ukufuniswa umama kaNgidi Minenhle Siphesihle owayaziwa ngoSibiya Diva. Ubaba wakhe uNgidi Simangaliso ongasekho emhlabeni.
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNks B.P Kubeka enombolweni ethi : 031 788 1193.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMkhize Nontando Hope owayezalwa uMkhize Khalanqani ongwasekho emhlabeni.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaKweyama Lindokuhle Robert amthola kuKweyama Vumelani Princess ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNks B.P Kubeka enombolweni ethi : 031 788 1193.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaZuma Nhlonipho Nomthandazo ezalwa uZuma Thando Pennelope ongasekho.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMntambo Manelisi owayezalwa uMntambo Gloria Busisiwe ongasekho emhlabeni.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMntambo Zama owayezalwa uMntambo Gloria Busisiwe ongasekho.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaKwanele Sithole ongaziwa. Umama wakhe uBongekile Promise Sithole ongasekho emhlabeni owayehlala e-Elandskop. Onolwazi sicelqa athintane nosonhlalakahle u-P Zungu enombolweni ethi : 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaZekhethelo Nonhle Sithole ongaziwa kanti umama wakhe uThandekile Beryl Sithole ongasekho nowayehlala e-Elandskop KwaMncane.
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-S. F Memela enombolweni ethi : 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa abazali bakaLuyand, Sinikeziwe noBanele Mshengi.
Umama wabo uNompumelelo Mshengu. Ubaba kaLuyanda uMbuso Mbanjwa waseMafakatini, ubaba kaBanele noSinikeziwe u-S. Zuma .
Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-A.S Mncwabe enombolweni ethi : 033 505 0083/4/7.